ဂျပန်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ လျှို.ဝှက် အချစ်ဟိုတယ်တွေ အကြောင်း | Buzzy
ဂျပန်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ လျှို.ဝှက် အချစ်ဟိုတယ်တွေ အကြောင်း
ဂျပန်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချစ်ဟိုတယ်တွေအကြောင်း ဒေါ့ကျူမန်ထရီ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးခဲ့သူကတော့ ဘယ်ဂျီယံဓါတ်ပုံဆရာ Zaza Bertrand ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ဟိုတယ်တွေလို့ လူသိများတယ် ဒီနေရာတွေဟာ ကမ္ဘာက သိပ်မသိသေးတဲ့ ဂျပန်ရဲ. လျှို.ဝှက်နေရာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
ဂပြနျနိုငျငံက စိတျဝငျစားဖှယျရာ အခဈြဟိုတယျတှအေကွောငျး ဒေါ့ကြူမနျထရီ ပုံရိပျတှကေို ရိုကျကူးခဲ့သူကတော့ ဘယျဂြီယံဓါတျပုံဆရာ Zaza Bertrand ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခဈြဟိုတယျတှလေို့ လူသိမြားတယျ ဒီနရောတှဟော ကမ်ဘာက သိပျမသိသေးတဲ့ ဂပြနျရဲ. လြှို.ဝှကျနရောတှထေဲက တဈခုပါပဲ။
အချစ်ဟိုတယ်တွေမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ ရှိခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာထဲကပါ ၊ ၁၉၆၀ မှာ အိုဆာကာကနေ အစပြုလို့ ဒီနေရာတွေဟာ နာမည်ကြီးလာပါတယ် ။ လူတွေရဲ. မိသားစုကြားမှာ စောင့်ထိန်းရမယ့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေလိုတဲ့ စုံတွဲတွေ အတွက် အခုလိုနေရာပေါင်း များစွာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရှိလာရတာပါ။
အခဈြဟိုတယျတှမှော ပွညျ့တနျဆာလုပျငနျးတှေ ရှိခဲ့တာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာထဲကပါ ၊ ၁၉၆၀ မှာ အိုဆာကာကနေ အစပွုလို့ ဒီနရောတှဟော နာမညျကွီးလာပါတယျ ။ လူတှရေဲ. မိသားစုကွားမှာ စောငျ့ထိနျးရမယျ့ ကိုယျရေးကိုယျတာတှကွေောငျ့ လှတျလှတျလပျလပျ နလေိုတဲ့ စုံတှဲတှေ အတှကျ အခုလိုနရောပေါငျး မြားစှာ ဂပြနျနိုငျငံမှာ ရှိလာရတာပါ။
အချစ်ဟိုတယ်တွေဟာ နာရီပိုင်း ငှားရမ်းနေထိုင်နိုင်တဲ့ အခန်းလေးတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ညတာ တည်းခိုဖို့အတွက်တော့ ၅၅ ပေါင်လောက် ကျသင့်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအရ စုံတွဲပေါင်း တစ်သန်းကျော်ဟာ ဒီဟိုတယ်တွေကို နေ့စဉ်လာရောက်ပါသတဲ့။
အခဈြဟိုတယျတှဟော နာရီပိုငျး ငှားရမျးနထေိုငျနိုငျတဲ့ အခနျးလေးတှေ ဖွဈပွီး တဈညတာ တညျးခိုဖို့အတှကျတော့ ၅၅ ပေါငျလောကျ ကသြငျ့ပါတယျ။ ခနျ့မှနျးခွအေရ စုံတှဲပေါငျး တဈသနျးကြျောဟာ ဒီဟိုတယျတှကေို နစေ့ဉျလာရောကျပါသတဲ့။
ဘယ်လိုပဲဆိုကြပါစေ ၊ အချစ်ဟိုတယ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပေါများနေပါစေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုအခန်းတွေကို လက်ခံဖို့ လူသိရှင်ကြား လုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေဆဲပါပဲ။
ဘယျလိုပဲဆိုကွပါစေ ၊ အခဈြဟိုတယျတှေ ဘယျလောကျပဲ ပေါမြားနပေါစေ ဂပြနျနိုငျငံမှာတော့ ဒီလိုအခနျးတှကေို လကျခံဖို့ လူသိရှငျကွား လုပျဖို့ ခကျခဲနဆေဲပါပဲ။